၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့် ပတ်သတ်၍ ချင်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် သစ်တောသတ္တုဝန်ကြီး ဦးမန်ဟင်းလ်ဒါးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။
Post byဖြိုးလွင်အောင်(AMIA) on Monday, March 12,2018
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် သစ်တောသတ္တုဝန်ကြီး ဦးမန်ဟင်းလ်ဒါး။ ဓာတ်ပုံ- ဖြိုးလွင်အောင်(AMIA)
၂၀၁၂ လယ်ယာမြေ ဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကြောင့် တိုင်းရင်း သားဒေသများရှိ ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လာကြသည့် ဓားမဦးချ ရိုးရာမြေများကို လက်လွှတ်ဆုံး ရှုံးခံရမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားဒေသအချို့မှ အဆိုပါ ဥပဒေကို ဖြတ်သိမ်းပေးရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အသိအမှတ်ပြု ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် ဥပဒေအသစ်ကို ပြင်ဆင်ပြဌာန်းပေးရန် တောင်းဆိုလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်နေကြပါသည်။
ရှေးဘိုးဘွား လက်ထပ်ကစလို့ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၏ ရိုးရာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ဆောင် နေမှု အပိုင်းများနှင့် ၂၀၁၂ လယ် ယာမြေဥပဒေအပါ် တိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးတစ်ပါး၏ အမြင်သဘောထားများကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ချင်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် သစ်တော သတ္တုဝန်ကြီး ဦးမန်ဟင်းလ်ဒါးအား AMIA- Farmer Digital TV မှ အယ်ဒီတာ ဖြိုးလွင်အောင်မှ သွားရောက်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိ ချင်းပြည်နယ်မှာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပေးထားတဲ့ လယ်၊ ယာမြေ ဧကပေါင်း ဘယ်လောက်ထိ ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမှ မရှိပဲ ရှေးဘိုးဘွားလက်ထပ်ကတည်းက လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးနေတဲ့ ရိုးရာမြေ ဧက ပေါင်း ဘယ်လောက်ထိ ရှိပါသလဲ ခင်ဗျ။
ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ ဧရိယာအကျယ်အ၀န်းက စုစုပေါင်း ဧက (၈၉) သိန်းကျော် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်းကျွန်း၊ ဥယျာဉ်၊ တောင်ယာ အသားတင် စိုက်ပျိုးမြေ ဧကပေါင်း (၁၈၀,၂၆၈) ဧက ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲ မှာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ပုံစံ(၇) ထုတ်ပေးထားနိုင်တဲ့ ဧကအရေအတွက်က (၄၉,၀၃၈) ဧက ရှိပါတယ်။ မိရိုးဖ လာ ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်က လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးလာခဲ့ကြတဲ့ ရိုးရာတောင်ယာမြေ ဧကပေါင်း (၁၃၁,၇၉၅) ဧက ရှိပါတယ်။
၂၀၁၂ လယ်ယာမြေ ဥပဒေမှာ ပါရှိတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေနဲ့ မြေလွတ်၊ မြေလတ်နှင့် မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်အရ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်လာကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးနေမှုအပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသား ၀န်ကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ခင်ဗျ။
အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားရင်ပေါ့နော် လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော့ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှာ ပြောရမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ၁၈၈၉ (Upper Burma Land and Revenue Regulation) Burma Proper (Upper Burma) ပေါ့နော် အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန် ဥပဒေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်လောက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဟာကို တစ်ချို့နေရာမှာ ကိုင်တွယ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဟာကတော့ ကျွန်တော်အမြင် အထက်မြန်မာပြည် (Upper Burma) နဲ့ပဲ သက်ဆိုင် တယ်၊ ဥပဒေ သက်ရောက်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်တွေက ၁၈၈၉ မြန် မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ ချင်းပြည်နယ်ကိုတော့ ၁၈၉၄ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှ သိမ်းပိုက်တာဖြစ်တဲ့အ တွက် ဒီဥပဒေဟာ အထက်မြန်မာပြည်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်တွေက ရှမ်းပြည်နယ်ကိုဆို Shan Federated နဲ့ အုပ်ချုပ်တယ်။ ကချင်ဆိုလည်း Kachn Hill Regulation နဲ့ အုပ်ချုပ်တယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် ၁၈၉၆ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Chin Hill Regulation Act စတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ သီးခြားအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက် ဒီဥပဒေတွေမှာ နဂိုရှိခဲ့တဲ့ စော်ဘွားအုပ်ချုပ်မှုစနစ် တောင်တန်းဒေသ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မိရိုးဖလာအစဉ်အလာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို အသိအမှတ်ပြု သီးခြား အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး အင်္ဂလိပ်အောက် မကျခင် ၁၈၉၃-၁၈၉၄ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေး မရခင်အထိ ကျင့်သုံးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုရင် ချင်း ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ စော်ဘွားတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို အသိအမှတ်ပြု အုပ် ချုပ်တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ (အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်) ဆိုတော့ လွတ်လပ်ရေးရတော့ Federated Area လို့ဆို တဲ့ ရှမ်း ရယ်၊ ကချင် ရယ်၊ ချင်း ရယ် လွတ်လပ်ရေး အတူတူ ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒါတွေကို ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ ပြန်အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ စော်ဘွားခေတ်ကုန်သွားတယ်။ ကုန်သွားချိန်မှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ (Chin Special Division Act 1984) နဲ့ အုပ်ချုပ်လာတာ ဒီဟာကလည်း လက်ရှိ အသက်ရှင်နေတဲ့သဘော ဥပဒေအ ရ တွေ့ရတယ်။ ဒီဟာမှာလည်း မိရိုးဖလာဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့ အများစု အုပ်ချုပ်ထားတာ၊ မြေယာစီမံခန့်ခွဲထားတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ ၂၀၁၂ မြေယာဥပဒေကတော့ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ ၁၉၅၃ လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်ရေး ဥပဒေ၊ နောက် ၁၉၆၃ သီးစားချထားရေး ဥပဒေတို့ကို အခြေခံပြီး ပြုစုထားတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ စောစောက မေးထားသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မိရိုးဖလာ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ် သတ်ပြီး တိုက်ရိုက်အချိုး မကျဘူးဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကိစ္စတော်တော်များများမှာပဲ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ Conflict ပေါ့နော် နဲနဲအယူအဆ ခံယူတဲ့အခါမှာ ကွာခြားမှုရှိတယ်လို့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်း သားအားလုံးမှာ ရှိကြတယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ မိရိုးဖလာ နှစ်ပေါင်းများစွာ စိုက်ပျိုလာတဲ့မြေကို ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ယူ ဆကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ ၂၀၁၂ လယ်ယာမြေ ဥပဒေအရ မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ မြေကို အစိုးရက အချိန်မရွေး သိမ်းပိုက်စီမံပိုင်ခွင့် ရှိသလိုမျိုးဆိုတော့ လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား စိုက်ပျိုးရေး ၀န်ကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်း ရင်းသားတွေရဲ့ မြေယာတွေ နစ်နာမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု မရှိအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေမှာ အနည်းနဲ့အများ ဒီလိုမျိုး အဆင်မပြေမှု တွေ ရှိကြတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ နစ်နာမှု အတိုင်းအတာ တော်တော်များများ ရှိသလို အငြင်းပွားမှု၊ ပြည်မဒေ သများနဲ့ အခြေခံ သဘောတရား မတူညီမှု၊ သဘောမတူမှုတွေကို တော်တော်များများကို တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ဆို ကယား၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းမှာလည်း တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ဒါကို ရေရှည်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေအသစ် ထုတ်မယ်ဆိုရင် တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို အလေးထားထည့်သွင်းပြီးတော့ ဥပဒေပြဌာန်းမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုမိုမျှတတဲ့၊ ပိုမိုလက်တွေ့ကျတဲ့၊ ပိုမိုအသုံးချ လို့ရတဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အဲ့ဒါဆို ၂၀၁၂ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ မြေလွတ်၊ မြေလတ်၊ မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေရဲ့ ဘယ်အပိုင်းကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်နေလဲ။ နောက် ဘယ်အချက်တွေကို ထပ်မံထည့်သွင်း ရေးဆွဲသင့် ပါသလဲ။
အဲ့ဒါကတော့ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်း ဥပဒေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အသစ်ရေးဆွဲတာ၊ ပြင်ဆင်တာကို အထူးမပြောလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် စောစောက ပြောသလို မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းမှာလည်း မိရိုးဖလာဘိုးဘွားပိုင် ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ဟာ မျိုးကို ဥပမာ မိရိုးဖလာ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ မိုးကြိုးဝိုင်းလိုဟာမျိုးကို သူတို့ရွာတွေက ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် ထိန်း ထားတဲ့ဟာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ တောင်ယာခုတ်ကွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိတဲ့ဟာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ထင်းခုတ်ကွက် ရှိတဲ့ဟာတွေကို အကုန်လုံးတော့ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းအနေနဲ့ မြင်ပြီးတော့ စာရင်းထည့်နေရင် တော့ အဆင်မပြေဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို မရိုးဖလာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို အလေးထား ပြီးတော့ ပြုပြင်အသစ်ဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား ဒေသအချို့မှာ ရိုးရာမြေတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့၊ ၂၀၁၂ မြေလွတ်၊ မြေလတ်၊ မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာ ရှိတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာရော အဲ့ဒီလို တောင်း ဆိုနေတာတွေ ရှိလားဗျ။
အဲ့ဒီလိုမျိုး အတိအကျ ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာ ကျွန်တော် မကြားမိသေးဘူးပေါနော်။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေ တစ်ခု ထုတ်ရင် တစ်ပြည်လုံးကို လွှမ်းခြုံတဲ့ အာဏာသက်ရောက်တဲ့ ဥပဒေထုတ်ရင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေရဲ့ ဓ လေ့ထုံးတမ်း၊ အထူးသဖြင့် မြေယာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သဘောထားကို CSO ဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး ပေါ့နော် ဒေသခံတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ တောင်သူလယ်သမား အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ တွေရဲ့ သဘောထားတွေနဲ့ ထုတ်ပြန်ရင်တော့ ပိုပြီးတော့ ထိရောက်တဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်လာမယ် လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရက ပြည်သူအစိုးရ ပြည်သူအသံနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှိနေ တဲ့ သူဒေသနဲ့သူ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ချင်းမှာဆိုရင် မျိုးနွယ်စု အများကြီးရှိတယ်။ အဲ့ဒါကို စုပေါင်းပြီးတော့ ဒါ ကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လုပ်ရင်တော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ခြားတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ကျွန်တော် မသိဘူး။ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် သဘာဝအားဖြင့် တူနေတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ စော်ဘွားခေတ်ကတည်းက မြေကိုဘယ်လို ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ ခုတ် ကွက်ကို ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်တယ်၊ ထင်းခုတ်ကွက်ကို ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်တယ် စသဖြင့်ပေါ့နော် မိုးကြိုးဝိုင်းအနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ သူ့ဒေသ၊ သူ့မြို့နယ်၊ သူ့မျိုးနွယ်နဲ့ သူ ရှိပြီးသားဆိုတော့ ရိုးရာဓလေ့က သိပ် ကွာခြားချက် မရှိပါဘူး။ သဘောတူညီမှု ရယူလို့ ရပါတယ်။
အဲ့ဒါဆိုရင် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကို ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ CSO တွေရဲ့ သဘောတူညီမှုနဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရက တောင်းဆိုပေးသွားမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာလား။
အမှန်ကတော့ ပြည်နယ်အစိုးရ ဆိုတာလည်း ပြည်သူအစိုးရပါပဲ။ ပြည်နယ်အစိုးရက သူ့သဘောထားနဲ့ သူ လုပ် လို့မရဘူး။ အဲ့ဒီလို ပြည်သူတွေက အကြံပေးရင်တော့ ရပါတယ်။ အမှန်ကတော့ အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်၊ ပြည်သူအစိုးရဆိုရင်တော့ ပြည်သူရဲ့ အသံကို နားထောင်ရမှာ။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းပြီးတော့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း နဲ့၊ သဘောတူညီမှုနဲ့ လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ ပြည်သူအစိုးရဆိုတော့ CSO တွေက တင်တဲ့ဟာက လည်း ကောင်းတယ်ဆိုရင် လက်ခံရမှာပဲ။ ပြည်သူတစ်ဦးချင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံပြုချက် တွေကို ကျွန်တော်တို့က အမြဲတမ်း ကြိုဆိုနေပါတယ်။ လက်ခံပါတယ်။
၂၀၁၂ လယ်ယာမြေ ဥပဒေက တိုင်းရင်းသားဒေသတွေရဲ့ မိရိုးဖလာ မြေအသုံးပြုမှုနဲ့ လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူတွေရဲ့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို လျစ်လျူရှုထားတယ်လို့ရော ထင်ပါသလား ခင်ဗျ။
လျစ်လျူရှုထားတယ်လို့တော့ ကျွန်တော် မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကိစ္စမှာ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ အချိုးမကျပဲနဲ့ နဲနဲလေး လုပ်ရကိုင်ရတာ ခက်ခဲနေတာတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ ဒါကို ကျွန်တော် စောစောက ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ သူရဲ့ဒေသဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး၊ ဥပမာဆို အခုပြင်ဆင်နေတဲ့ ၂၀၁၇ မြေသိမ်းဥပဒေဆို တစ်ပိုဒ်ပါတယ်။ ဒီဟာက အထောက်အထား မရှိပေမယ့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သက် သေခံမှုကို အထောက်အထားအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် တို့ မိရိုးဖလာ တောနေတောင်သားတွေက ဥပဒေလည်း သိပ်ပြီးတော့ နားမလည်ဘူး။ ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမ လဲဆိုလည်း နားမလည်ဘူး။ ဒါပမယ့် ကိုယ့်ရွာသားအချင်းချင်း ဒီမြေက ဦးဖြူပိုင်တယ်၊ ဦးနီပိုင်တယ်၊ သူဦးနီရဲ့ အဘိုးက ဓားမဦးချ ခုတ်ထွင်လာခဲ့တဲ့ ဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာတွေမှာ အများစုသည် စည်းကမ်းရှိကြ တယ်။ ဒီတောင်ယာကို ဦးဖြူက မခုတ်နိုင်လို့ ဦးမဲက ခုတ်ချင်ရင် ခွင့်တောင်းပြီး ခုတ်ရတယ်။ ဆိုတော့ ပိုင်ဆိုင် မှုက ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ တစ်ရွာလုံး၊ တစ်ဖက်ရွာနီးချုပ်စပ် အကုန်လုံးက သိနေတဲ့ဟာဆိုတော့ ဒါကိုအသိအ မှတ်ပြုလုပ်နိုင်ရင် လယ်ယာမြေဥပဒေလည်း အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်၊ ဟို ပြည်မကို ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူး။ တောင် ပေါ်တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ မိရိုးဖလာဓလေ့ထုံးတမ်းကို အလေးထား ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့ ပို မိုကောင်းမွန်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
လက်ရှိ ဥပဒေအရ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လုပ်ကိုင်လာပေမယ့် နှစ်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ အ ထောက်အထားရှိမှ ဘိုးဘွားပိုင်မြေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ကျွန်တော် နားလည်ထားတယ်။ ဟိုးအရင်က ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုအခွန်ဆောင်တဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသလဲဗျ။
ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ တောင်တန်းဒေသ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာက စော စောက ပြောသလို ၁၈၈၉ ကိုလိုနီခေတ်က ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ (Upper Burma Land and Revenue Regulation) နဲ့ လွှမ်းခြုံမှု မရှိဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ထပ်ပြီး ရှင်းပြမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် ၁၈၉၆ ခုနှစ်မှာ Chin Hill Regulation နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ် သီးခြားအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ် ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာ ဘာကိုအဓိကထားလဲဆို တော့ စော်ဘွားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့သဘော။ ကိုယ့်အချင်းချင်း အုပ်ချုပ်တဲ့သဘောကို အသိအမှတ် ပြု ဥပဒေပြဌာန်း စီမံခန့်ခွဲတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် တောက်လျောက်ဟာ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာနဲ့ အသက်ရှင်လာတာ။ ဆိုတော့ လူတစ်ဦးသည် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ လုပ်ဖို့အတွက် ခုတ်ကွက် ဆယ်ခု ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆယ့်ငါးခုလောက် အမြဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။ သူ့အဘိုး၊ အဘိုးဘယ် သူရဲ့ ခုတ်ကွက်စခဲ့တာ၊ ဓားမဦးချ စခဲ့တာဆိုပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီဟာကို စော် ဘွားပိုင်ဆိုရင် စော်ဘွားကို ကျွန်တော်တို့က အခွန်ပေးရပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် ၁၈၈၉ (Upper Burma Land and Revenue Regulation) အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန် ဥပဒေထဲမှာ ဘိုးဘွားပိုင်ဆိုတဲ့ဟာသည် ၁၈၈၉ မတိုင်မီ ၁၂ နှစ်အတွင်း မြေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ရယ်၊ နောက်အဲ့ဒီ ၁၈၈၉ မတိုင်မီပဲ မြေခွန်ဆောင်ထားတဲ့ သူ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ပါထားတယ်။ အဲ့တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀၊ ၄၀ လောက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကို ပြန်သုံး သပ်ရရင် အဲ့ဒီမှာ အခွန်ဆောင်စရာ အင်္ဂလိပ်လည်း မရောက်သေးပါဘူး။ နောက် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် နောက်ဆုံးအထိလည်း ချင်းပြည်နယ်တို့၊ ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တို့ ဘာတို့က ဆောင်ရတာ မရှိပါဘူး။ ပြည်မအ ကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်အသေးစိတ် မသိလို့ မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဆောင်တာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်မှာဆောင်လဲဆိုတော့ စော်ဘွားတွေဆီမှာ ကျွန်တော်တို့က တောင်ယာတစ်ကွက်ခုတ်ရင် ဆန်တစ်တင်း လိုဟာမျိုး၊ ဆန်တစ်ပုံးလိုဟာမျိုး နှစ်စဉ်ဆောငိပြီးတော့ ဆက်သရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စော်ဘွားတွေ ဆီမှာ အခွန်ဆောင်တဲ့ သဘောမျိုး ဒါကိုသမိုင်းတစ်လျောက် ကျွန်တော်တို့တောင် နဲနဲမီတော့ ဒါကိုအခွန် ဆောင်တယ်လို့ မှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။ နောက် အမဲပစ်တဲ့အခါမှာလည်း သားကောင်ရလာရင် မိုင် ၃၀၊ ၄၀ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ပုခုံးတစ်ခြမ်း ပို့သဆက်သရတယ်။ ဒါကို မိရိုးဖလာအခွန်ဆောင်တဲ့နည်းလို့ ကျွန်တော်က ယူဆပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာနဲ့ လုပ်တဲ့ဟာ၊ ထင်းခုတ်ကွက်စနစ်ကျနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဟာကို အကုန်လုံး သိမ်းကျုံးပြီးတော့ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းအနေနဲ့ အစိုးရပိုင်းက သိမ်းမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ အ တွက်က တော်တော်လေးကို နစ်နာမှု ရှိလာမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲ့တော့ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းထဲက ဘယ် ဟာတွေပါလဲ၊ ဘယ်ဟာတွေ မပါဘူးလဲဆိုတာ သေချာစိစစ်ဖို့လိုတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ရိုးယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတွေက ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာလည်း ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေရှိတော့ လက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပါ ထိခိုက်လာ နိုင်သလား ခင်ဗျ။
ဒီ ဥပဒေအသစ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ အဆင့်ကတော့ ကြီးကျယ်လွန်းမယ် ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး Process က သတ်သတ်ပေါ့နော်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကတော့ ကျွန်တော် တို့အားလုံး တန်းတူညီမျှမှု ရရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ် အောက်ခြေ အနေအ ထား မငြိမ်းချမ်းတဲ့ နေရာတွေပေါ့၊ ပွတ်တိုက်မှုရှိတဲ့ နေရာမှာတော့ တစ်ချို့တော့ ရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ် တစ်ခုနဲ့တွက်ရင်တော့ ဒီဥပဒေကြောင့်မို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး မရှိဘူးလို့ ယူ ဆပါတယ်။
တစ်ချို့တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ မြေလွတ်၊ မြေလတ်၊ မြေရိုင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်မယ့်အစား ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေ တာတွေရှိတယ်။ ၀န်ကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး သုံးသပ်ချင်ပါသလဲ။
ဖြတ်သိမ်းဖို့ အသစ်ရေးဆွဲဖို့ကတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့ဟာလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ တောင်ယာခုတ်ကွက်ကို မခုတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဒါကို မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းလို့ သိမ်းကျုံးပြီး ခေါ်ဖို့မသင့်ဘူး လို့ ပြောချင်းတယ်။ အဲ့ဒီအချက်လေးတွေတော့ အသစ်ထုတ်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြုပြင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီအချက်တွေက တော့ အလေးအနက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပြည်မမှာလိုမဟုတ်ဘူး Permanence လယ်ယာမြေ မဟုတ်တော့ တစ်နှစ်၊ တစ်နှစ်နဲ့ သွားတဲ့ဟာကို အနားပေးတဲ့အချိန်မှာမြေလွတ်၊ မြေရိုင်းဆိုပြီး လုပ်လိုက်ရင်တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါလေးကိုတော့ ပိုင်ရှင်ရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာကို အဓိက စိစစ်ပြီးတော့ မြေ လွတ်၊ မြေရိုင်းထဲမှာ ထည့်သင့်၊ မထည့်သင့် စဉ်းစားလုပ်ဆောင် သင့်ပါတယ်။
အဲ့တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်လာကြတဲ့ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မြေယာတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံး ရအောင် ၀န်ကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ ခင်ဗျ။
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေတာကတော့၊ လုပ်နေတာကတော့ ကြိုးဝိုင်း၊ ကြိုးပြင် အမျိုးသားဥယျာဉ်ကို သတ်မှတ်သလို ဒေသခံတွေရဲ့ ခံစားချက်ပေါ့ ဒီအစိုးရကပဲ အကုန်လုံးယူသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင် ဒေသခံ အစုအဖွဲ့ပိုင် ပြုစုပျိုးထောင်သစ်တော ဖြစ်လာအောင် စည်းရုံးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မိရိုး ဖလာပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ မြေတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အသိအမှတ် ပြုနိုင်မလဲပေါ့နော် ကျွတော်တို့ ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာဆိုရင် ဥပဒေအရ ပုံစံ(၇) ပေးလို့မရဘူး။ ပေးလို့မရတော့ လယ်သမားအနေနဲ့ သူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုက အ သိအမှတ်ပြုမှု မရှိဘူး။ ဆိုတော့ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမလဲ။ ဥပမာ မိရိုးဖလာနဲ့ ဧက ၅၀ လောက် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်မလားဆိုတဲ့ အချက်လည်း ကျွန် တော်တို့ စဉ်းစားနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မြေလွတ်၊ မြေရိုင်း ဥပဒေအရ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရာကို မလုပ်ပဲနဲ့၊ တစ်ခြားနည်းနဲ့ သုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အချက်ရယ်၊ နောက်တစ်ချက်က သူရဲ့သတ်မှတ်ထား တဲ့၊ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့၊ အာမခံကြေး သွင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲ လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ အ ချက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အဲ့ဒါကို လေးနှစ်အတွင်း မလုပ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီအာမခံကြေးကို သိမ်းပြီးတော့ အ စိုးရရဲ့ပိုင်မြေ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဆိုတော့ အဲ့ဒီလေးနှစ်ဆိုတဲ့ အကန့်အသတ်လေးကို မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းဥပ ဒေမှာ ပြန်လည်စိစစ်ပြီးတော့ မြေပြင်အနေအထား၊ အောက်ခြေအနေအထားနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် ဘယ် လိုဆောင်ရွက်သင့်လဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာကို တဖြည်းဖြည်းလျော့ပြီးတော့ Permanence လယ်ယာဖြစ်ဖို့ပေါ့နော် ဥပမာဆိုရင် နှစ်ရှည်သီးနှံ ထောပတ်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ကော်ဖီ၊ ၀ဥ၊ လက်ဖက်၊ မျောက်ငို စသဖြင့် တောင်ယာခုတ် တာထက် လယ်သမားတွေ အကျိုးပိုရှိတဲ့ နှစ်ရှည်ဥယျာဉ်ခြံမြေ ဖြစ်အောင် ကျွန်တော် တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြိုး စားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ တောင်ယာခုတ်ခြင်းသည် တစ်နှစ်အတွက် ၀မ်းစာဖူလုံရုံ ဖြစ်ပါတယ်။ တောလည်းပျက်တယ် လုပ်အားလည်း အများကြီးပေးရတယ် နောက်ရလာတဲ့ အမြတ်က ရသင့်သလောက် မရ ဘူးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ နှစ်ရှည် သွားတဲ့အခါကျတော့ သုံး၊ လေးနှစ် အချိန်ယူရတာဆိုတော့ အဲ့ဒီကြားထဲမှာ သူတို့ စားဖို့သောက်ဖို့ကို နှစ်တို၊ နှစ်လတ် ချေးငွေလိုဟာမျိုး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာကို မလုပ်ကြဖို့ စည်းရုံးနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို အချိန်ပေးပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ၀န်ကြီးခင်ဗျ။
၂၀၁၂ လယျယာမွေ ဥပဒတှေငျပါရှိသညျ့ မွလှေတျ၊ မွလေပျနှငျ့ မွရေိုငျး စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒကွေောငျ့ တိုငျးရငျး သားဒသေမြားရှိ ဘိုးဘှားအစဉျအဆကျ စိုကျပြိုးလုပျကိုငျလာကွသညျ့ ဓားမဦးခြ ရိုးရာမွမြေားကို လကျလှတျဆုံး ရှုံးခံရမှုမြား ဖွဈပျေါနသေညျ့အတှကျ တိုငျးရငျးသားဒသေအခြို့မှ အဆိုပါ ဥပဒကေို ဖွတျသိမျးပေးရနျနှငျ့ တိုငျးရငျးသားမြား၏ ရိုးရာမွေ စီမံခနျ့ခှဲမှုကို အသိအမှတျပွု ထညျ့သှငျးရေးဆှဲထားသညျ့ ဥပဒအေသဈကို ပွငျဆငျပွဌာနျးပေးရနျ တောငျးဆိုလှုံ့ဆျောမှုမြား ပွုလုပျနကွေပါသညျ။
ရှေးဘိုးဘှား လကျထပျကစလို့ ရှပွေ့ောငျးတောငျယာစနဈဖွငျ့ စိုကျပြိုးလုပျကိုငျ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး ပွုလုပျခဲ့သညျ့ ခငျြးပွညျနယျရှိ တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုမြား၏ ရိုးရာမွေ စီမံခနျ့ခှဲမှုနှငျ့ ပတျသတျပွီး လုပျဆောငျ နမှေု အပိုငျးမြားနှငျ့ ၂၀၁၂ လယျ ယာမွဥေပဒအေပျါ တိုငျးရငျးသားဝနျကွီးတဈပါး၏ အမွငျသဘောထားမြားကို သိရှိနိုငျဖို့အတှကျ ခငျြးပွညျနယျ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးနှငျ့ သဈတော သတ်တုဝနျကွီး ဦးမနျဟငျးလျဒါးအား AMIA- Farmer Digital TV မှ အယျဒီတာ ဖွိုးလှငျအောငျမှ သှားရောကျတှေ့ ဆုံမေးမွနျးခဲ့ပါသညျ။
လကျရှိ ခငျြးပွညျနယျမှာ တရားဝငျ မှတျပုံတငျပေးထားတဲ့ လယျ၊ ယာမွေ ဧကပေါငျး ဘယျလောကျထိ ရှိပွီး ပိုငျဆိုငျမှု အထောကျအထားမှ မရှိပဲ ရှေးဘိုးဘှားလကျထပျကတညျးက လုပျကိုငျစိုကျပြိုးနတေဲ့ ရိုးရာမွေ ဧက ပေါငျး ဘယျလောကျထိ ရှိပါသလဲ ခငျဗြ။
ခငျြးပွညျနယျရဲ့ ဧရိယာအကယျြအဝနျးက စုစုပေါငျး ဧက (၈၉) သိနျးကြျော ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ လယျ၊ ယာ၊ ကိုငျးကြှနျး၊ ဥယြာဉျ၊ တောငျယာ အသားတငျ စိုကျပြိုးမွေ ဧကပေါငျး (၁၈၀,၂၆၈) ဧက ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီအထဲ မှာ တရားဝငျ မှတျပုံတငျ ပုံစံ(၇) ထုတျပေးထားနိုငျတဲ့ ဧကအရအေတှကျက (၄၉,၀၃၈) ဧက ရှိပါတယျ။ မိရိုးဖ လာ ဘိုးဘှားအစဉျအဆကျက လုပျကိုငျစိုကျပြိုးလာခဲ့ကွတဲ့ ရိုးရာတောငျယာမွေ ဧကပေါငျး (၁၃၁,၇၉၅) ဧက ရှိပါတယျ။
၂၀၁၂ လယျယာမွေ ဥပဒမှော ပါရှိတဲ့ လယျယာမွဥေပဒနေဲ့ မွလှေတျ၊ မွလေတျနှငျ့ မွရေိုငျး စီမံခနျ့ခှဲရေး ဥပဒေ ပွဌာနျးခကျြအရ နှဈပေါငျးမြားစှာ လုပျကိုငျလာကွတဲ့ တိုငျးရငျးသားတှေ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ဆုံးရှုံးနမှေုအပျေါမှာ တိုငျးရငျးသား ၀နျကွီးတဈယောကျအနနေဲ့ ဘယျလိုမွငျပါသလဲ ခငျဗြ။
အဲ့ဒါကတော့ ကြှနျတျောတို့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ စဉျးစားရငျပေါ့နျော လယျယာမွေ ပိုငျဆိုငျခှငျ့နဲ့ ပတျသတျပွီး တော့ ဗွိတိသြှကိုလိုနီခတျေမှာ ပွောရမယျ့ သဘောရှိပါတယျ။ ၁၈၈၉ (Upper Burma Land and Revenue Regulation) Burma Proper (Upper Burma) ပေါ့နျော အထကျမွနျမာပွညျ မွနှေငျ့အခှနျ ဥပဒဟော ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၁၃၀ ကြျောလောကျက ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ဟာကို တဈခြို့နရောမှာ ကိုငျတှယျပွီးတော့ လုပျဆောငျနတော ကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီဟာကတော့ ကြှနျတျောအမွငျ အထကျမွနျမာပွညျ (Upper Burma) နဲ့ပဲ သကျဆိုငျ တယျ၊ ဥပဒေ သကျရောကျတယျလို့ သုံးသပျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ အင်ျဂလိပျတှကေ ၁၈၈၉ မွနျ မာပွညျကို သိမျးပိုကျခဲ့တယျ။ ခငျြးပွညျနယျကိုတော့ ၁၈၉၄ ပတျဝနျးကငျြလောကျမှ သိမျးပိုကျတာဖွဈတဲ့အ တှကျ ဒီဥပဒဟော အထကျမွနျမာပွညျနဲ့ပဲ သကျဆိုငျတာ ဖွဈတယျလို့ ယူဆပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ အင်ျဂလိပျတှကေ ရှမျးပွညျနယျကိုဆို Shan Federated နဲ့ အုပျခြုပျတယျ။ ကခငျြဆိုလညျး Kachn Hill Regulation နဲ့ အုပျခြုပျတယျ။ ခငျြးပွညျနယျမှာဆိုရငျ ၁၈၉၆ ခုနှဈမှာ ထုတျပွနျထားတဲ့ Chin Hill Regulation Act စတဲ့ ဥပဒတှေနေဲ့ သီးခွားအုပျခြုပျထားတဲ့အတှကျ ဒီဥပဒတှေမှော နဂိုရှိခဲ့တဲ့ စျောဘှားအုပျခြုပျမှုစနဈ တောငျတနျးဒသေ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ မိရိုးဖလာအစဉျအလာ မွယောပိုငျဆိုငျမှုကို အသိအမှတျပွု သီးခွား အုပျခြုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ မွနျမာနိုငျငံတဈခုလုံး အင်ျဂလိပျအောကျ မကခြငျ ၁၈၉၃-၁၈၉၄ ပတျဝနျးကငျြလောကျကနေ လှတျလပျရေး မရခငျအထိ ကငျြ့သုံးလာတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီဥပဒမှောဆိုရငျ ခငျြး ပွညျနယျမှာ ရှိနတေဲ့ စျောဘှားတှကေို လုပျပိုငျခှငျ့ပေးပွီးတော့ ရိုးရာဓလထေုံ့းတမျးတှကေို အသိအမှတျပွု အုပျ ခြုပျတဲ့ သဘောမြိုး ဖွဈပါတယျ။ (အဲ့ဒီတုနျးကဆိုရငျ) ဆိုတော့ လှတျလပျရေးရတော့ Federated Area လို့ဆို တဲ့ ရှမျး ရယျ၊ ကခငျြ ရယျ၊ ခငျြး ရယျ လှတျလပျရေး အတူတူ ယူမယျဆိုပွီးတော့ ဒါတှကေို ဖွတျသိမျးပွီးတော့ ပွနျအုပျခြုပျပါတယျ။ စျောဘှားခတျေကုနျသှားတယျ။ ကုနျသှားခြိနျမှာ ၁၉၄၈ ခုနှဈမှာ ကြှနျတျောတို့ (Chin Special Division Act 1984) နဲ့ အုပျခြုပျလာတာ ဒီဟာကလညျး လကျရှိ အသကျရှငျနတေဲ့သဘော ဥပဒအေ ရ တှရေ့တယျ။ ဒီဟာမှာလညျး မိရိုးဖလာဓလထေုံ့းတမျးနဲ့ အမြားစု အုပျခြုပျထားတာ၊ မွယောစီမံခနျ့ခှဲထားတာ ကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီ ၂၀၁၂ မွယောဥပဒကေတော့ ကြှနျတျောမွငျတာကတော့ ၁၉၅၃ လယျယာမွေ နိုငျငံပိုငျ ပွုလုပျရေး ဥပဒေ၊ နောကျ ၁၉၆၃ သီးစားခထြားရေး ဥပဒတေို့ကို အခွခေံပွီး ပွုစုထားတယျလို့ ယူဆပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာ စောစောက မေးထားသလိုပဲ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ မိရိုးဖလာ မွယောပိုငျဆိုငျခှငျ့နဲ့ ပတျ သတျပွီး တိုကျရိုကျအခြိုး မကဘြူးဆိုတာ တှရေ့တယျ။ နောကျတဈခုက ကိစ်စတျောတျောမြားမြားမှာပဲ ဒီဟာနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ Conflict ပေါ့နျော နဲနဲအယူအဆ ခံယူတဲ့အခါမှာ ကှာခွားမှုရှိတယျလို့ တောငျပျေါတိုငျးရငျး သားအားလုံးမှာ ရှိကွတယျလို့ ကြှနျတျောယူဆပါတယျ။
အဲ့ဒီတော့ တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှော မိရိုးဖလာ နှဈပေါငျးမြားစှာ စိုကျပြိုလာတဲ့မွကေို ပိုငျဆိုငျတယျလို့ ယူ ဆကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျရှိ ၂၀၁၂ လယျယာမွေ ဥပဒအေရ မှတျပုံမတငျထားတဲ့ မွကေို အစိုးရက အခြိနျမရှေး သိမျးပိုကျစီမံပိုငျခှငျ့ ရှိသလိုမြိုးဆိုတော့ လကျရှိ တိုငျးရငျးသား စိုကျပြိုးရေး ၀နျကွီးတဈပါးအနနေဲ့ ကိုယျ့တိုငျး ရငျးသားတှရေဲ့ မွယောတှေ နဈနာမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု မရှိအောငျ ဘယျလိုဆောငျရှကျသှားဖို့ ရှိပါသလဲ ခငျဗြာ။
ဒါကတော့ ကြှနျတျောပွောသလိုပဲ တောငျပျေါတိုငျးရငျးသားတှမှော အနညျးနဲ့အမြား ဒီလိုမြိုး အဆငျမပွမှေု တှေ ရှိကွတယျဆိုတာ သိရတယျ။ နဈနာမှု အတိုငျးအတာ တျောတျောမြားမြား ရှိသလို အငွငျးပှားမှု၊ ပွညျမဒေ သမြားနဲ့ အခွခေံ သဘောတရား မတူညီမှု၊ သဘောမတူမှုတှကေို တျောတျောမြားမြားကို တှရေ့ပါတယျ။ ဥပမာ ဆို ကယား၊ ကရငျ၊ ရှမျး၊ ကခငျြ၊ ခငျြးမှာလညျး တဈခြို့ကိစ်စတှမှော ရှိပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲ့ဒါကို ရရှေညျမှာ ကြှနျတျောတို့ ဥပဒအေသဈ ထုတျမယျဆိုရငျ တောငျပျေါတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ဓလထေုံ့းစံ မွယောပိုငျဆိုငျမှုကို အလေးထားထညျ့သှငျးပွီးတော့ ဥပဒပွေဌာနျးမယျဆိုရငျတော့ ပိုမိုမြှတတဲ့၊ ပိုမိုလကျတှကေ့တြဲ့၊ ပိုမိုအသုံးခြ လို့ရတဲ့ ဥပဒေ ဖွဈလာမယျလို့ ယူဆပါတယျ။
အဲ့ဒါဆို ၂၀၁၂ လယျယာမွေ ဥပဒေ မွလှေတျ၊ မွလေတျ၊ မွရေိုငျး စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒရေဲ့ ဘယျအပိုငျးကို ပွငျဆငျဖို့ လိုအပျနလေဲ။ နောကျ ဘယျအခကျြတှကေို ထပျမံထညျ့သှငျး ရေးဆှဲသငျ့ ပါသလဲ။
အဲ့ဒါကတော့ မွလှေတျ၊ မွရေိုငျး ဥပဒနေဲ့ ပတျသတျလို့ အသဈရေးဆှဲတာ၊ ပွငျဆငျတာကို အထူးမပွောလိုဘူး။ ဒါပမေယျ့ စောစောက ပွောသလို မွလှေတျ၊ မွရေိုငျးမှာလညျး မိရိုးဖလာဘိုးဘှားပိုငျ ဆိုငျရာဆိုငျခှငျ့ ရှိတဲ့ဟာ မြိုးကို ဥပမာ မိရိုးဖလာ ထိနျးသိမျးလာတဲ့ မိုးကွိုးဝိုငျးလိုဟာမြိုးကို သူတို့ရှာတှကေ ဘိုးဘှားအစဉျအဆကျ ထိနျး ထားတဲ့ဟာတှေ၊ နောကျပွီးတော့ တောငျယာခုတျကှကျ သတျသတျမှတျမှတျ ရှိတဲ့ဟာတှေ၊ နောကျပွီးတော့ ထငျးခုတျကှကျ ရှိတဲ့ဟာတှကေို အကုနျလုံးတော့ မွလှေတျ၊ မွရေိုငျးအနနေဲ့ မွငျပွီးတော့ စာရငျးထညျ့နရေငျ တော့ အဆငျမပွဘေူးလို့ ယူဆပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့မို့ မွပေိုငျဆိုငျမှုကို မရိုးဖလာ ပိုငျဆိုငျမှုကို အလေးထား ပွီးတော့ ပွုပွငျအသဈဆှဲတယျဆိုရငျလညျး အဲ့ဒါကို ထညျ့သှငျးစဉျးစား သငျ့ပါတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
တိုငျးရငျးသား ဒသေအခြို့မှာ ရိုးရာမွတှေကေို အသိအမှတျပွုပေးဖို့၊ ၂၀၁၂ မွလှေတျ၊ မွလေတျ၊ မွရေိုငျး စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒကေို ဖွတျသိမျးပေးဖို့ တောငျးဆိုနကွေတာ ရှိတယျ။ ခငျြးပွညျနယျမှာရော အဲ့ဒီလို တောငျး ဆိုနတောတှေ ရှိလားဗြ။
အဲ့ဒီလိုမြိုး အတိအကြ ဖွတျသိမျးပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာ ကြှနျတျော မကွားမိသေးဘူးပေါနျော။ ဒါပမေယျ့ ဥပဒေ တဈခု ထုတျရငျ တဈပွညျလုံးကို လှမျးခွုံတဲ့ အာဏာသကျရောကျတဲ့ ဥပဒထေုတျရငျ တိုငျးရငျးသားဒသေတှရေဲ့ ဓ လထေုံ့းတမျး၊ အထူးသဖွငျ့ မွယောနဲ့ပတျသတျတဲ့ သဘောထားကို CSO ဖွဈဖွဈ၊ အဖှဲ့အစညျး အသီးသီး ပေါ့နျော ဒသေခံတှေ၊ နောကျပွီးတော့ တောငျသူလယျသမား အဖှဲ့အစညျးတှေ၊ ပွညျနယျ၊ တိုငျးအစိုးရအဖှဲ့ တှရေဲ့ သဘောထားတှနေဲ့ ထုတျပွနျရငျတော့ ပိုပွီးတော့ ထိရောကျတဲ့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ဥပဒေ ဖွဈလာမယျ လို့ ယူဆပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အစိုးရက ပွညျသူအစိုးရ ပွညျသူအသံနဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ ရှိနေ တဲ့ သူဒသေနဲ့သူ ဥပမာ ကြှနျတျောတို့ ခငျြးမှာဆိုရငျ မြိုးနှယျစု အမြားကွီးရှိတယျ။ အဲ့ဒါကို စုပေါငျးပွီးတော့ ဒါ ကို အကောငျးဆုံး ဘယျလိုဖွဈမလဲ ဆိုတဲ့ဟာမြိုးကို ညှိနှိုငျးပွီးတော့ လုပျရငျတော့ အဆငျပွမေယျ ထငျပါတယျ။ တဈခွားတိုငျးနဲ့ ပွညျနယျ ကြှနျတျော မသိဘူး။ ခငျြးပွညျနယျမှာဆိုရငျ သဘာဝအားဖွငျ့ တူနတေဲ့ အခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိတယျ။ စျောဘှားခတျေကတညျးက မွကေိုဘယျလို ပိုငျဆိုငျတယျ။ ရှပွေ့ောငျးတောငျယာ ခုတျ ကှကျကို ဘယျလိုပိုငျဆိုငျတယျ၊ ထငျးခုတျကှကျကို ဘယျလိုပိုငျဆိုငျတယျ စသဖွငျ့ပေါ့နျော မိုးကွိုးဝိုငျးအနနေဲ့ ထိနျးသိမျးတဲ့ ဓလထေုံ့းတမျးအရ သူ့ဒသေ၊ သူ့မွို့နယျ၊ သူ့မြိုးနှယျနဲ့ သူ ရှိပွီးသားဆိုတော့ ရိုးရာဓလကေ့ သိပျ ကှာခွားခကျြ မရှိပါဘူး။ သဘောတူညီမှု ရယူလို့ ရပါတယျ။
အဲ့ဒါဆိုရငျ ဥပဒေ ပွငျဆငျပေးဖို့ကို ဒသေခံ တိုငျးရငျးသားတှေ၊ CSO တှရေဲ့ သဘောတူညီမှုနဲ့ ပွညျနယျ အစိုးရက တောငျးဆိုပေးသှားမယျလို့ ဆိုလိုခငျြတာလား။
အမှနျကတော့ ပွညျနယျအစိုးရ ဆိုတာလညျး ပွညျသူအစိုးရပါပဲ။ ပွညျနယျအစိုးရက သူ့သဘောထားနဲ့ သူ လုပျ လို့မရဘူး။ အဲ့ဒီလို ပွညျသူတှကေ အကွံပေးရငျတော့ ရပါတယျ။ အမှနျကတော့ အဲ့ဒါအကောငျးဆုံးပေါ့နျော၊ ပွညျသူအစိုးရဆိုရငျတော့ ပွညျသူရဲ့ အသံကို နားထောငျရမှာ။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုပူးပေါငျးပွီးတော့ ညှိညှိနှိုငျးနှိုငျး နဲ့၊ သဘောတူညီမှုနဲ့ လုပျနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပဲ။ ပွညျသူအစိုးရဆိုတော့ CSO တှကေ တငျတဲ့ဟာက လညျး ကောငျးတယျဆိုရငျ လကျခံရမှာပဲ။ ပွညျသူတဈဦးခငျြး၊ အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ အကွံပွုခကျြ တှကေို ကြှနျတျောတို့က အမွဲတမျး ကွိုဆိုနပေါတယျ။ လကျခံပါတယျ။
၂၀၁၂ လယျယာမွေ ဥပဒကေ တိုငျးရငျးသားဒသေတှရေဲ့ မိရိုးဖလာ မွအေသုံးပွုမှုနဲ့ လုပျကှကျငယျ တောငျသူတှရေဲ့ မွပေိုငျဆိုငျမှုကို လဈြလြူရှုထားတယျလို့ရော ထငျပါသလား ခငျဗြ။
လဈြလြူရှုထားတယျလို့တော့ ကြှနျတျော မပွောလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့ကိစ်စမှာ တောငျပျေါတိုငျးရငျးသား တှရေဲ့ မွပေိုငျဆိုငျမှုနဲ့ အခြိုးမကပြဲနဲ့ နဲနဲလေး လုပျရကိုငျရတာ ခကျခဲနတောတော့ တှရေ့ပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲ့ ဒါကို ကြှနျတျော စောစောက ပွောတဲ့အတိုငျးပဲ သူရဲ့ဒသေဆိုငျရာ အခှငျ့အရေး၊ ဥပမာဆို အခုပွငျဆငျနတေဲ့ ၂၀၁၇ မွသေိမျးဥပဒဆေို တဈပိုဒျပါတယျ။ ဒီဟာက အထောကျအထား မရှိပမေယျ့ ဘေးပတျဝနျးကငျြရဲ့ သကျ သခေံမှုကို အထောကျအထားအနနေဲ့ လကျခံနိုငျတယျဆိုတဲ့ သဘောမြိုးပေါ့နျော။ နောကျတဈခုက ကြှနျတျော တို့ မိရိုးဖလာ တောနတေောငျသားတှကေ ဥပဒလေညျး သိပျပွီးတော့ နားမလညျဘူး။ ဘယျလိုမှတျပုံတငျရမ လဲဆိုလညျး နားမလညျဘူး။ ဒါပမယျ့ ကိုယျ့ရှာသားအခငျြးခငျြး ဒီမွကေ ဦးဖွူပိုငျတယျ၊ ဦးနီပိုငျတယျ၊ သူဦးနီရဲ့ အဘိုးက ဓားမဦးခြ ခုတျထှငျလာခဲ့တဲ့ ဟာဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ကြေးရှာတှမှော အမြားစုသညျ စညျးကမျးရှိကွ တယျ။ ဒီတောငျယာကို ဦးဖွူက မခုတျနိုငျလို့ ဦးမဲက ခုတျခငျြရငျ ခှငျ့တောငျးပွီး ခုတျရတယျ။ ဆိုတော့ ပိုငျဆိုငျ မှုက ဓလထေုံ့းတမျးအရ တဈရှာလုံး၊ တဈဖကျရှာနီးခြုပျစပျ အကုနျလုံးက သိနတေဲ့ဟာဆိုတော့ ဒါကိုအသိအ မှတျပွုလုပျနိုငျရငျ လယျယာမွဥေပဒလေညျး အဲ့လိုမြိုးဖွဈလာရငျ၊ ဟို ပွညျမကို ကြှနျတျောမဆိုလိုဘူး။ တောငျ ပျေါတိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှော မိရိုးဖလာဓလထေုံ့းတမျးကို အလေးထား ထညျ့သှငျးဆောငျရှကျရငျတော့ ပို မိုကောငျးမှနျမယျလို့ ယူဆပါတယျ။
လကျရှိ ဥပဒအေရ မြိုးရိုးစဉျဆကျ လုပျကိုငျလာပမေယျ့ နှဈအတိုငျးအတာ တဈခုထိ အခှနျဆောငျထားတဲ့ အ ထောကျအထားရှိမှ ဘိုးဘှားပိုငျမွအေဖွဈ အသိအမှတျပွုတယျလို့ ကြှနျတျော နားလညျထားတယျ။ ဟိုးအရငျက ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှေ အနနေဲ့ ဘယျလိုအခှနျဆောငျတဲ့ စနဈကို ကငျြ့သုံးခဲ့ကွသလဲဗြ။
ကြှနျတျောတို့ ဘိုးဘှားပိုငျမွနေဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ တောငျတနျးဒသေ၊ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှောက စော စောက ပွောသလို ၁၈၈၉ ကိုလိုနီခတျေက ပွဌာနျးခဲ့တဲ့ (Upper Burma Land and Revenue Regulation) နဲ့ လှမျးခွုံမှု မရှိဘူးဆိုတာ ကြှနျတျောထပျပွီး ရှငျးပွမယျ။ ကြှနျတျောတို့ ခငျြးပွညျနယျမှာဆိုရငျ ၁၈၉၆ ခုနှဈမှာ Chin Hill Regulation နဲ့ အုပျခြုပျခဲ့တယျ သီးခွားအုပျခြုပျခဲ့တယျ ပေါ့နျော။ အဲ့ဒီမှာ ဘာကိုအဓိကထားလဲဆို တော့ စျောဘှားအုပျခြုပျရေးစနဈနဲ့ အုပျခြုပျတဲ့သဘော။ ကိုယျ့အခငျြးခငျြး အုပျခြုပျတဲ့သဘောကို အသိအမှတျ ပွု ဥပဒပွေဌာနျး စီမံခနျ့ခှဲတဲ့ သဘောဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ခငျြးပွညျနယျမှာဆိုရငျ တောကျလြောကျဟာ ရှပွေ့ောငျးတောငျယာနဲ့ အသကျရှငျလာတာ။ ဆိုတော့ လူတဈဦးသညျ ရှပွေ့ောငျးတောငျယာ လုပျဖို့အတှကျ ခုတျကှကျ ဆယျခု ဒါမှမဟုတျရငျ ဆယျ့ငါးခုလောကျ အမွဲတမျး ပိုငျဆိုငျထားကွတယျ။ သူ့အဘိုး၊ အဘိုးဘယျ သူရဲ့ ခုတျကှကျစခဲ့တာ၊ ဓားမဦးခြ စခဲ့တာဆိုပွီးတော့ အသိအမှတျပွုခဲ့တယျ။ နောကျတဈခုက ဒီဟာကို စျော ဘှားပိုငျဆိုရငျ စျောဘှားကို ကြှနျတျောတို့က အခှနျပေးရပါတယျ။ ဥပမာဆိုရငျ ၁၈၈၉ (Upper Burma Land and Revenue Regulation) အထကျမွနျမာပွညျ မွနှေငျ့အခှနျ ဥပဒထေဲမှာ ဘိုးဘှားပိုငျဆိုတဲ့ဟာသညျ ၁၈၈၉ မတိုငျမီ ၁၂ နှဈအတှငျး မွဖွေဈရမယျဆိုတဲ့ အခကျြရယျ၊ နောကျအဲ့ဒီ ၁၈၈၉ မတိုငျမီပဲ မွခှေနျဆောငျထားတဲ့ သူ ဖွဈရမယျဆိုတဲ့ဟာ ပါထားတယျ။ အဲ့တော့ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၁၃၀၊ ၄၀ လောကျက ဖွဈခဲ့တဲ့ဟာကို ပွနျသုံး သပျရရငျ အဲ့ဒီမှာ အခှနျဆောငျစရာ အင်ျဂလိပျလညျး မရောကျသေးပါဘူး။ နောကျ ကုနျးဘောငျမငျးဆကျ နောကျဆုံးအထိလညျး ခငျြးပွညျနယျတို့၊ ကနျြတဲ့ပွညျနယျတို့ ဘာတို့က ဆောငျရတာ မရှိပါဘူး။ ပွညျမအ ကွောငျးကတော့ ကြှနျတျောအသေးစိတျ မသိလို့ မပွောဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဆောငျတာ ရှိပါတယျ။ ဘယျမှာဆောငျလဲဆိုတော့ စျောဘှားတှဆေီမှာ ကြှနျတျောတို့က တောငျယာတဈကှကျခုတျရငျ ဆနျတဈတငျး လိုဟာမြိုး၊ ဆနျတဈပုံးလိုဟာမြိုး နှဈစဉျဆောငိပွီးတော့ ဆကျသရတယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ စျောဘှားတှေ ဆီမှာ အခှနျဆောငျတဲ့ သဘောမြိုး ဒါကိုသမိုငျးတဈလြောကျ ကြှနျတျောတို့တောငျ နဲနဲမီတော့ ဒါကိုအခှနျ ဆောငျတယျလို့ မှတျယူစခေငျြပါတယျ။ နောကျ အမဲပဈတဲ့အခါမှာလညျး သားကောငျရလာရငျ မိုငျ ၃၀၊ ၄၀ ဘယျလောကျဝေးဝေး ပုခုံးတဈခွမျး ပို့သဆကျသရတယျ။ ဒါကို မိရိုးဖလာအခှနျဆောငျတဲ့နညျးလို့ ကြှနျတျောက ယူဆပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့မို့လို့ ရှပွေ့ောငျးတောငျယာနဲ့ လုပျတဲ့ဟာ၊ ထငျးခုတျကှကျစနဈကနြဲ့ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဟာကို အကုနျလုံး သိမျးကြုံးပွီးတော့ မွလှေတျ၊ မွရေိုငျးအနနေဲ့ အစိုးရပိုငျးက သိမျးမယျဆိုရငျ ပွညျသူတှေ အ တှကျက တျောတျောလေးကို နဈနာမှု ရှိလာမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ အဲ့တော့ မွလှေတျ၊ မွရေိုငျးထဲက ဘယျ ဟာတှပေါလဲ၊ ဘယျဟာတှေ မပါဘူးလဲဆိုတာ သခြောစိစဈဖို့လိုတယျ။
အဲ့ဒီတော့ ရိုးယာမွပေိုငျဆိုငျမှုနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ပွဿနာတှကေ ကရငျ၊ ကယား၊ မှနျ၊ ရှမျး စတဲ့ တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှောလညျး ဖွဈပျေါနတောတှရှေိတော့ လကျရှိဖျောဆောငျနတေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကိုပါ ထိခိုကျလာ နိုငျသလား ခငျဗြ။
ဒီ ဥပဒအေသဈက ငွိမျးခမျြးရေးကို ထိခိုကျလာနိုငျမလားဆိုတဲ့ အဆငျ့ကတော့ ကွီးကယျြလှနျးမယျ ထငျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီငွိမျးခမျြးရေး Process က သတျသတျပေါ့နျော။ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုတာကတော့ ကြှနျတျော တို့အားလုံး တနျးတူညီမြှမှု ရရငျတော့ ငွိမျးခမျြးရေးရမှာပဲ။ ဒါပမေယျ့ တဈခုတော့ရှိတယျ အောကျခွေ အနအေ ထား မငွိမျးခမျြးတဲ့ နရောတှပေေါ့၊ ပှတျတိုကျမှုရှိတဲ့ နရောမှာတော့ တဈခြို့တော့ ရှိနိုငျတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ခငျြးပွညျနယျ တဈခုနဲ့တှကျရငျတော့ ဒီဥပဒကွေောငျ့မို့ ငွိမျးခမျြးရေး ထိခိုကျနိုငျတဲ့ အနအေထားမြိုး မရှိဘူးလို့ ယူ ဆပါတယျ။
တဈခြို့တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှော မွလှေတျ၊ မွလေတျ၊ မွရေိုငျးဥပဒကေို ပွငျဆငျမယျ့အစား ဖွတျသိမျးပေးဖို့ တောငျးဆိုနေ တာတှရှေိတယျ။ ၀နျကွီးအနနေဲ့ ဘယျလိုမြိုး သုံးသပျခငျြပါသလဲ။
ဖွတျသိမျးဖို့ အသဈရေးဆှဲဖို့ကတော့ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကောငျးတဲ့ဟာလို့ ကြှနျတျောမွငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိ တောငျယာခုတျကှကျကို မခုတျနိုငျတဲ့အခြိနျမှာ ဒါကို မွလှေတျ၊ မွရေိုငျးလို့ သိမျးကြုံးပွီး ချေါဖို့မသငျ့ဘူး လို့ ပွောခငျြးတယျ။ အဲ့ဒီအခကျြလေးတှတေော့ အသဈထုတျရငျပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ပွုပွငျရငျပဲ ဖွဈဖွဈ ဒီအခကျြတှကေ တော့ အလေးအနကျ ထညျ့သှငျးစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က ပွညျမမှာလိုမဟုတျဘူး Permanence လယျယာမွေ မဟုတျတော့ တဈနှဈ၊ တဈနှဈနဲ့ သှားတဲ့ဟာကို အနားပေးတဲ့အခြိနျမှာမွလှေတျ၊ မွရေိုငျးဆိုပွီး လုပျလိုကျရငျတော့ မဖွဈပါဘူး။ ဒါလေးကိုတော့ ပိုငျရှငျရှိတယျ၊ မရှိဘူးဆိုတာကို အဓိက စိစဈပွီးတော့ မွေ လှတျ၊ မွရေိုငျးထဲမှာ ထညျ့သငျ့၊ မထညျ့သငျ့ စဉျးစားလုပျဆောငျ သငျ့ပါတယျ။
အဲ့တော့ နှဈပေါငျးမြားစှာ လုပျကိုငျလာကွတဲ့ ကိုယျ့တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ မွယောတှေ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ မဆုံးရှုံး ရအောငျ ၀နျကွီးအနနေဲ့ ဘယျလိုပွငျဆငျမှုတှေ လုပျဆောငျနပေါသလဲ ခငျဗြ။
လကျရှိ ကြှနျတျောတို့ ကွိုးစားနတောကတော့၊ လုပျနတောကတော့ ကွိုးဝိုငျး၊ ကွိုးပွငျ အမြိုးသားဥယြာဉျကို သတျမှတျသလို ဒသေခံတှရေဲ့ ခံစားခကျြပေါ့ ဒီအစိုးရကပဲ အကုနျလုံးယူသှားတဲ့ ပုံစံမြိုးမဖွဈအောငျ ဒသေခံ အစုအဖှဲ့ပိုငျ ပွုစုပြိုးထောငျသဈတော ဖွဈလာအောငျ စညျးရုံးလုပျဆောငျနပေါတယျ။ နောကျတဈခကျြက မိရိုး ဖလာပိုငျဆိုငျလာတဲ့ မွတှေကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့ အသိအမှတျ ပွုနိုငျမလဲပေါ့နျော ကြှတျောတို့ ရှပွေ့ောငျး တောငျယာဆိုရငျ ဥပဒအေရ ပုံစံ(၇) ပေးလို့မရဘူး။ ပေးလို့မရတော့ လယျသမားအနနေဲ့ သူ့မှာပိုငျဆိုငျမှုက အ သိအမှတျပွုမှု မရှိဘူး။ ဆိုတော့ ဒါကိုကြှနျတျောတို့ ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဖွရှေငျးမလဲ။ ဥပမာ မိရိုးဖလာနဲ့ ဧက ၅၀ လောကျ ပိုငျဆိုငျတဲ့ လူတဈယောကျကို မွလှေတျ၊ မွရေိုငျးနဲ့ မှတျပုံတငျမလားဆိုတဲ့ အခကျြလညျး ကြှနျ တျောတို့ စဉျးစားနတေယျ။ ဒါပမေယျ့ မွလှေတျ၊ မွရေိုငျး ဥပဒအေရ သူ့ရဲ့ရညျရှယျခကျြ သတျမှတျထားတဲ့ အရာကို မလုပျပဲနဲ့၊ တဈခွားနညျးနဲ့ သုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အခကျြရယျ၊ နောကျတဈခကျြက သူရဲ့သတျမှတျထား တဲ့၊ အခှနျဆောငျထားတဲ့၊ အာမခံကွေး သှငျးထားတဲ့လုပျငနျးနဲ့ ဆကျနှယျတဲ့လုပျငနျးပဲ လုပျလို့ရမယျဆိုတဲ့ အ ခကျြပါတယျ။ နောကျတဈခကျြက အဲ့ဒါကို လေးနှဈအတှငျး မလုပျနိုငျရငျ အဲ့ဒီအာမခံကွေးကို သိမျးပွီးတော့ အ စိုးရရဲ့ပိုငျမွေ ဖွဈမယျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးဆိုတော့ အဲ့ဒီလေးနှဈဆိုတဲ့ အကနျ့အသတျလေးကို မွလှေတျ၊ မွရေိုငျးဥပ ဒမှော ပွနျလညျစိစဈပွီးတော့ မွပွေငျအနအေထား၊ အောကျခွအေနအေထားနဲ့ အံဝငျခှငျကြ ဖွဈအောငျ ဘယျ လိုဆောငျရှကျသငျ့လဲဆိုတာ စဉျးစားဖို့ လိုအပျတယျလို့ ယူဆပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး ရှပွေ့ောငျးတောငျယာကို တဖွညျးဖွညျးလြော့ပွီးတော့ Permanence လယျယာဖွဈဖို့ပေါ့နျော ဥပမာဆိုရငျ နှဈရှညျသီးနှံ ထောပတျသီး၊ စပဈြသီး၊ ကျောဖီ၊ ၀ဥ၊ လကျဖကျ၊ မြောကျငို စသဖွငျ့ တောငျယာခုတျ တာထကျ လယျသမားတှေ အကြိုးပိုရှိတဲ့ နှဈရှညျဥယြာဉျခွံမွေ ဖွဈအောငျ ကြှနျတျော တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကွိုး စားပွီးတော့ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ တောငျယာခုတျခွငျးသညျ တဈနှဈအတှကျ ၀မျးစာဖူလုံရုံ ဖွဈပါတယျ။ တောလညျးပကျြတယျ လုပျအားလညျး အမြားကွီးပေးရတယျ နောကျရလာတဲ့ အမွတျက ရသငျ့သလောကျ မရ ဘူးပေါ့နျော။ အဲ့တော့ နှဈရှညျ သှားတဲ့အခါကတြော့ သုံး၊ လေးနှဈ အခြိနျယူရတာဆိုတော့ အဲ့ဒီကွားထဲမှာ သူတို့ စားဖို့သောကျဖို့ကို နှဈတို၊ နှဈလတျ ခြေးငှလေိုဟာမြိုး ထောကျပံ့ပေးနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ရှပွေ့ောငျး တောငျယာကို မလုပျကွဖို့ စညျးရုံးနိုငျမယျလို့ ယူဆပါတယျ။
ဟုတျကဲ့ အခုလို အခြိနျပေးပွီး ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ဖွကွေားပေးတာ ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျ ၀နျကွီးခငျဗြ။
I enjoy you because of your whole work on this site. Gloria really likes engaging in investigations and it is obvious why. Almost all hear all relating to the compelling method you render helpful thoughts via this web blog and therefore increase participation from visitors on the topic and our own princess is certainly becoming educatedalot of things. Enjoy the rest of the year. You're performingagreat job. michael kors handbags
by rooxkwgfkx@gmail.com at June 08 2019
Thank youalot for giving everyone an extremely memorable chance to read critical reviews from this site. It's usually very good and packed withagood time for me and my office mates to visit your web site really three times inaweek to read the new issues you have. And of course, we're certainly astounded with all the exceptional solutions you serve. Some two ideas on this page are easily the best I have had. yeezy boost 350
by dvqyyz@gmail.com at June 05 2019
I not to mention my guys have already been going through the excellent ideas found on the blog and then all of the sudden I gotaterrible feeling I had not thanked the web site owner for those tips. All of the people happened to be totally joyful to learn them and already have simply been taking pleasure in those things. Thank you for turning out to be really considerate as well as for deciding on this form of quality things most people are really wanting to be aware of. My personal honest apologies for not expressing gratitude to you earlier. bape hoodie
by hjaaklir@gmail.com at June 05 2019
Thank you for your entire hard work on this website. My daughter take interest in working on research and it's easy to see why. I know all concerning the compelling means you create very helpful guidance through your web blog and as well as encourage contribution from some other people on the point then my simple princess is without question starting to learn so much. Have fun with the remaining portion of the new year. You are always conductingadazzling job. jordan shoes
by wpcgjagapq@gmail.com at June 01 2019
My husband and i have been now thrilled when Ervin managed to deal with his researching because of the precious recommendations he gained in your web site. It's not at all simplistic to simply find yourself giving for free things which usually many people have been selling. And we also acknowledge we have got the blog owner to thank because of that. All of the explanations you have made, the easy blog menu, the relationships you make it easier to engender - it's got mostly spectacular, and it's helping our son and our family recognize that the situation is amusing, and that's wonderfully mandatory. Thanks for all! yeezy boost
by fsoipunavk@gmail.com at May 27 2019
I would like to express some thanks to this writer for rescuing me from this particular circumstance. Asaresult of browsing throughout the search engines and obtaining proposals which were not helpful, I assumed my entire life was gone. Existing without the approaches to the difficulties you've fixed asaresult of your main post isaserious case, and those that would have negatively damaged my entire career if I hadn't noticed your website. That understanding and kindness in maneuveringalot of things was priceless. I don't know what I would've done if I had not discovered suchathing like this. I'm able to at this time look forward to my future. Thank you so much for the specialized and result oriented guide. I will not hesitate to propose the website to anyone who ought to have support on this situation. balenciaga shoes
by yqjqllm@gmail.com at May 24 2019
Thank youalot for providing individuals with an exceptionally memorable chance to discover important secrets from this website. It is usually so lovely and stuffed withagreat time for me personally and my office acquaintances to search the blog particularly three timesaweek to see the fresh issues you have. Not to mention, I'm so always happy with all the extraordinary pointers you give. Some3tips in this article are indeed the most effective we have all ever had. nike air force 1
by tshctsklo@gmail.com at May 19 2019
Thank youalot for giving everyoneavery terrific chance to check tips from this website. It really is so enjoyable and stuffed withagood time for me personally and my office acquaintances to search your web site at the least three times every week to study the latest secrets you will have. And lastly, I'm actually fascinated considering the beautiful thoughts you serve. Some3areas in this article are clearly the best I've had. michael kors handbags
by dawbmsdnzvk@gmail.com at May 15 2019
My spouse and i have been so peaceful when Louis managed to conclude his investigations by way of the precious recommendations he obtained out of the web site. It is now and again perplexing to simply always be freely giving key points which other people may have been trying to sell. We really know we've got the writer to appreciate for that. All the illustrations you made, the easy website navigation, the relationships you will assist to promote - it is all superb, and it's really making our son and our family believe that this situation is excellent, which is highly fundamental. Many thanks for all the pieces! ferragamo belts [url=http://www.ferragamobelt.us]ferragamo belts[/url]
by mouxoffju@gmail.com at May 10 2019
I wanted to makeasimple comment to appreciate you for the stunning suggestions you are posting on this website. My time consuming internet look up has now been compensated with reliable details to go over with my family and friends. I would assert that most of us visitors are truly blessed to exist inafabulous site with very many special professionals with valuable guidelines. I feel quite grateful to have encountered your entire website page and look forward to some more awesome times reading here. Thanks once again foralot of things.
by http://www.vans-outlet.us.com at May 07 2019